ပင်စင်အစီအစဉ် - မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်အသေးစိတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်။ | စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး
Encarni Arcoya | 25/07/2021 09:07 | ချွေတာ
သင်သည်သင်၏မွေးနေ့ကိုစတင်ပြီးအငြိမ်းစားယူချိန်ကိုရောက်လာသောအခါ၊ သင်၏အနာဂတ်ကိုစတင်စဉ်းစားလာသည်။ လူအများကအငြိမ်းစားပင်စင်များကိုရေရှည်တွင်တည်တံ့နိုင်သည်ဟုသံသယဝင်ကြသည် ပင်စင်အစီအစဉ်။ ဒါကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်သလဲ? အဲဒါကောင်းကောင်းရှိသလား။ ဘာကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများကိုပေးသလဲ?
သင်ဤမေးခွန်းများ (သို့) အခြားမေးခွန်းများကိုလည်းမေးခဲ့ပါကကျွန်ုပ်တို့ကပင်စင်အစီအစဉ်များ၊ သူတို့မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ ၎င်းသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကောင်းလျှင်သို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သောရှုထောင့်များရှိပါကသင်နှင့်စကား ပြော၍ သင်ပြောလိုသည်။
2 ပင်စင်အစီအစဉ် - စပိန်မှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
သင်ပထမ ဦး ဆုံးလိုအပ်သည်မှာပင်စင်အစီအစဉ်ဆိုသည်ကိုကောင်းစွာနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒါအမှန်ပါပဲ အမြဲတမ်းရေရှည်တွင်ဖြစ်ပေါ်သောငွေစု။ ၎င်းသည်သင်အနားယူချိန်၌သင်၏ငွေအချို့ကိုစုဆောင်းရန်ကူညီပေးသောငွေစုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဥပမာ၊ မင်းမှာလစာယူရို ၂၀၀၀ ရှိတယ်လို့မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ပင်စင်အစီအစဉ်သည်စုစုပေါင်းယူရို ၂၀၀ ကို ၂၀၀၀ ယူရို ၂၀၀၀ ၏စုဆောင်းမှုအတွက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အငြိမ်းစားယူသည့်အချိန်တွင်သင်သည်သင်၏ပင်စင်ခံစားခွင့်သာမကသင်၏အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းစုဆောင်းထားသည့်စုဆောင်းမှုကိုပါသင်၏အနားယူမှုကိုဖြည့်စွက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။
ဒီအလေ့အကျင့်အတော်လေးအသုံးဝင်သည်, အထူးသဖြင့်များစွာသောစွန့်ခွာခဲ့သောပင်စင်ကိုဆက်လက်နေထိုင်ရန်မလွယ်ကူသောကြောင့်။ ထို့အပြင်အငြိမ်းစားယူခြင်းနှင့်ပင်စင်စီမံချက်ရှိခြင်းတို့သည်သဟဇာတမဟုတ်ပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်သင်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆုံးဖြတ်ရန်မဆုံးဖြတ်သောကြောင့်သင်သည်လွယ်ကူစွာအနားယူနိုင်သည်။
ပင်စင်အစီအစဉ် - စပိန်မှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
စပိန်နိုင်ငံတွင်သင်မှတ်သားထားရမည့်အချက်မှာ ၂၀၂၇ ခုနှစ်တွင် ၆၇ နှစ်အထိသတ်မှတ်ထားချိန်အထိအငြိမ်းစားယူသည့်အသက်သည်တိုးလာသည်။ သင့်တွင်လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ကြေး ၃၆ နှစ်ရှိသမျှကာလပတ်လုံးသင်သည်အသက် ၆၅ နှစ်သို့အနားယူနိုင်သည်၊ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်စင်ယူခြင်းသည်အနည်းငယ်မြင့်မားသောကြောင့်အနည်းငယ်ထိန်းထားခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ သူတို့အလုပ်မှာစွန့်စားမှုနှုန်းစတဲ့အထူးအဖြစ်အပျက်များရှိတယ်။
ပင်စင်အစီအစဉ်၏လည်ပတ်မှုသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဘဏ်များမှကမ်းလှမ်းသောဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုစာချုပ်ချုပ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ တစ်လလျှင်ငွေပမာဏကိုလှူဒါန်းပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်စဉ်အများဆုံးယူရို ၂၀၀၀ ရှိသည်။
အ ပင်စင်အစီအစဉ်များကိုတော် ၀ င်ဥပဒေပြုအမိန့် ၁/၂၀၀၂ နှင့်ပင်စင်စီမံကိန်းဥပဒေနှင့် RD ၃၀၄/၂၀၀၄ တို့ကထိန်းချုပ်သည်။ ပင်စင်အစီအစဉ်များ၏စည်းမျဉ်းကိုထူထောင်သည်အဘယ်မှာရှိ။
ဒီပိုက်ဆံကဘာလဲ။ ကောင်းပြီ, အသုံးအများဆုံးပုံသေဝင်ငွေ, variable ကိုဝင်ငွေ, ရောထွေးသို့မဟုတ်အာမခံအစီအစဉ်များ၌တည်ရှိ၏။ အစီအစဉ်၏မန်နေဂျာများက၎င်းကိုဂရုစိုက်ပြီးသင်စိတ်မပူပါနဲ့။
ဤကိန်းဂဏန်းသည်လူသိများသည်ဖြစ်သော်လည်းပင်စင်အစီအစဉ်အတွက်လစာ၏တစ်ဝက်ကိုဖယ်ထားရန်အနည်းငယ်သာဆုံးဖြတ်ကြသည်။ သို့သော်၊ များများလုပ်လေလေ၊ ရေရှည်တစ်ခုခုဖြစ်လေ၊ သင်ပိုမိုသုံးစွဲလေလေထိုငွေ၏အမြတ်အစွန်းများလေလေဖြစ်သည်။
ယခုသင်သည်ပင်စင်အစီအစဉ်နှင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုသင်တွေ့မြင်ရပြီဖြစ်သောကြောင့်ဤထုတ်ကုန်၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများကိုချိန်တွယ်ရန်အချိန်ရောက်ပြီ။ ပြီးတော့အဲဒါကိုလုပ်ဖို့မဆုံးဖြတ်ခင်၊ သင်ကသင့်တော်မကိုက်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိသိဖို့လိုတယ်။
အဆိုပါအကြား ပင်စင်အစီအစဉ်ကသင့်ကိုပေးသည့်အားသာချက်များ သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
ငှားခကိုနှုတ်ယူပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်၏နှစ်စဉ်လစာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ၀ င်ငွေကြေညာချက်တွင်ခွဲထုတ်ခြင်းအားဖြင့်၊ တကယ့်ဝင်ငွေကိုမရရှိနိုင်သော်လည်းသင်၏ပင်စင်အစီအစဉ်သို့သင်ထည့်လိုက်သောငွေများနုတ်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုတာက ကောင်းပြီ၊ မင်းကအခွန်နည်းတယ်။
သင်အစီအစဉ်ကိုသင်လိုချင်သူမည်သူမဆိုထံပေးပို့နိုင်သည်။ သာမန်အားဖြင့်ဤအရာသည်အမွေဆက်ခံသူများထံ၊ သင့်အချိန်မတိုင်မီသေဆုံးသည်အထိသို့မဟုတ်သင်စဉ်းစားထားသူကိုသာဖြစ်သည်။
သင်ပင်စင်အစီအစဉ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည် တနည်းအားဖြင့်သင်ကသင်၏အခြေအနေနှင့် / သို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ နှင့်ဘာမှပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ။
အားနည်းချက်များသည်ဤသွားပါ ယူဆထားသည့်စွန့်စားမှုအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ သငျသညျရှေးရိုးစွဲအလယ်အလတ်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ကတည်းက။
ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်ပင်စင်အစီအစဉ်သည်လူတစ် ဦး အနားယူမှသာပြန်လည်ကောင်းမွန်နိုင်သည်ဟုနားလည်သော်လည်း၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။ တည်ရှိ သင်၏ပင်စင်အစီအစဉ်ကိုကယ်ဆယ်ရန်ကူညီနိုင်သည့်အခြားအခြေအနေများ သင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သောငွေကိုပြန်ယူပါ။
သင်ကသူ့ကိုငှားရမ်းကတည်းက 10 နှစ်ဖြစ်လျှင်။ ယခုတွင်၎င်းတွင်သင်၏မန်နေးဂျင်းနှင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်လိုသည့်ကွဲပြားခြားနားမှုများရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ပင်စင်အစီအစဉ်ကို ၂၀၂၅ ခုနှစ်အထိနှိုင်းယှဉ်လျှင်သင်မကယ်တင်နိုင်ပါ။
သငျသညျရေရှည်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်။ ရေရှည်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ရန်သင်သည်အနည်းဆုံးရက်ပေါင်း ၃၆၀ အလုပ်လုပ်ရန်ရှာရမည်။
အကယ်၍ သင်သည်မသန်စွမ်းမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောရောဂါတစ်ခုခံစားခဲ့ရလျှင်။ မတော်တဆမှုတစ်ခု၊ သင့်အားစွမ်းဆောင်ရည်မကျစေနိုင်သည့်ရောဂါတစ်ခုစသည်တို့ဖြစ်သည်။
မင်းသေရင် ဤကိစ္စတွင်အမွေခံများကိုယ်တိုင်ပင်စင်ဝင်ငွေကိုပေးဆောင်ကာ ၀ င်ငွေခွန်ကိုပေးဆောင်နိုင်သည်။ ကောင်းသောအရာပင်စင်အစီအစဉ်များအမွေအခွန်ပေးဆောင်ကြဘူးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ပင်စင်အစီအစဉ်ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်၊ ကောင်းတာဆိုးတယ်ဆိုတာသင်သိပြီဆိုရင်သင်ငှားရမ်းရန်ဝံ့မည်လား။ သင်ကဒါကိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အရာလို့မြင်ရင်ခေတ်မီအောင်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာငါတို့ကိုအသိပေးပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး » ချွေတာ » ပင်စင်အစီအစဉ်: ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ